Dowladda Mareykanka xiriirka kala dhaxeeya Dowladda Ruushka halkuu marayaa? – Walaal24 Newss
December 25, 2018	0	By walaal24
Diblomaasiga ugu sarreeya ee Moscow ayaa ku dooday in Ruushku uu ku dadaalayo sidii looga hortagi lahaa khilaafka Mareykanka, laakiin labada waddanba waxay u muuqdeen in ay ku jiraan shil khatar ah sababtoo ah xiriir la’aanta.
Isniintii ayaa la weydiiyay suurtagalnimada in dagaal loo dhan yahay oo ka dhex dhaco wadaxaajoodka milatari ee Maraykanka iyo Ruushka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay wargayska Sputnik News in “qof kasta oo adduunka ah uu si fiican u fahmo: labada hogaamiye ee nukliyarka heysta Ruushka iyo Maraykanka, waxay yeelan doonaan cawaaqib xun ee aadanaha. ” Digniinta hore ee digniinta ah ee ku saabsan rajada ah in isbeddel lagu sameeyo hubka wax gumaada burbur weyn saameyn ku leh ee nukliyarka, ayuu yiri “shaki kuma jiro in aysan jirin wax guuleysatay dagaal nukliyeerka ah waana inaan marnaba la xakameynin.”
Lavrov ayaa sheegay in Washington iyo xulufadiisu ay “ku dhawadeen rabitaankooda juqraafi ahaaneed” iyo “aan diyaar u ahayn in ay la qabsadaan xaqiiqooyinka caalamiga ah ee aan isbeddelaynin danahooda.” Natiijo ahaan, wuxuu sheegay in wadahadaladii la hakiyay iyo heshiisyada caalamiga ah sida Heshiiska Saxaafadeed ee Intermediate-Nuclear Corps (INF) ayaa halis ugu jira in la xakameeyo, taasoo abuuraysa isbeddel xitaa halis ah.
“Khilaafka noocan oo kale ah, oo ku salaysan qalabka korontada ayaa keenaya in aan isku dheelitirnaan ammaanka caalamiga ah, oo uu gacan ka geysto tartanka hubka,” ayuu Lavrov u sheegay Sputnik News. “Xaalad ayaa laga yaabaa inay soo baxdo marka qiimaha qaladka ama isma-marinta ay noqoto mid dhimasho ah.”
Cilaaqaadka u dhaxeeya Galbeedka iyo Ruushka ayaa ka sii daraya tan iyo markii Ruushku uu ku biiray jariidada Crimean ee jimcaha 2014-ka kaas oo heley aqoonsi caalami ah oo xadidan iyada oo ay jiraan xiisad siyaasadeed oo sii socota ee Ukraine. Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamadda Ruushku ay gacan ka geysteen kala qeybsanayaasha ciidamada Ukraine ee ku yaala bariga NATO si ay u xoojiyaan xudduudkooda iyada oo ay la jiraan ciidamo caalami ah iyo difaacyo, oo horseed u ah in ay kor u qaadaan shaqadooda.
Xaaladda aan sugnayn ee Europe ayaa sii xumaatay eedeymaha sheegaya in Kremlin uu isku dayay inuu saameyn ku yeesho doorashadii madaxweynenimada ee 2016-ka kaas oo u tartamaya musharaxa Jamhuuriga ah ee Donald Trump. Washington (Ramaas) Febraayo 12, 2013 – Dawladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso xidhiidhka Ruushka ah ee ay la leedahay Mareykanka, iyadoo Washington ay sii ballaarisay cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka. waxay u dhaxeysaa 310 ilaa 3,400 mayl.
Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa sheegay in Ruushka ay tahay inuu bartilmaameedsado mid ka mid ah rakaabka Maraykanka ee loogu talagalay Yurub.
Dhanka kale, Lavrov ayaa sidoo kale walaac ka muujisay in Wasaaradda Arrimaha Dibedda aysan ka jawaabin isku daygeeda ay ku doonayso in ay ka gorgortanto Heshiiska Istaraatiijiyada Cusub ee Istaraatiijiyada Istaraatiijiga ah (START), kaas oo xaddidaya labada waddan ee qalabka nukliyeerka, kuna dhimi doono 2021. Maraykanka ayaa ku doodaya in Ruushku wuxuu ku xadgudbay waajibaadkiisa dagaal ee qaboobaha.
Milatariga Maraykanku waxa uu hayaa hoggaan aad u ballaaran oo ku wajahan milatariga Ruushka, laakiin wuxuu kasheegay kobcitaankiisa shaki qoto dheer. Dukumiintiyada istiraatiijiga ah ee Washington iyo Pentagon ayaa loo xilsaaray in ay ka horimaanayaan Moscow oo ah goolka ugu muhiimsan ee dalka. Dhanka kale, Ruushku wuxuu ku dhawaaqay horumarinta hubka cusub si loo xoojiyo farqiga u dhaxeeya labada awoodood ee hogaaminaya.
“Dabcan, waxaan qaadeynaa tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagu ilaalinayo danaha qaranka iyo xoojinta awoodda difaaca dalka,” ayuu Lavrov u sheegay Sputnik News. “Madaxweyne Putin ayaa arrintan ka hadlay wax ka badan hal jeer, isla markaana waxaan rajeyneynaa in dareenka guud uu wali sii wadi doono, ka dibna, dhammaan jagooyin kala-duwan, Ruushka iyo dawladaha reer galbeedka ayaa si wadajir ah u qaata qayb ka mid ah mas’uuliyadda mustaqbalka bani-aadmiga oo idil, raadinta jawaabo wax ku ool ah caqabadaha iyo hanjabaadaha waqtigeena. ”
Dhibaatooyinka caalamiga ah ee ku hareeraysan iskahorimaadka Ukraine ayaa cirka isku shareeray tan iyo markii bishii hore ee saddexda maraakiibta dagaalka ee Ukraine ay ku eedeeyeen in ay jabiyeen sharciga caalamiga ah ee bada ee ku wajahan xuduudaha Kerch ee u dhaxeeya Badda Casov. Shaqaalaha iyo maraakiibta ayaa weli ku jira xabsiga, iyada oo Kiev ay uga digtay suurtagalnimada dagaal oo u dhexeeya Moscow.
Ukraine maaha xubin ka mid ah NATO, sidaas darteed weerarkii lagu galay Jamhuuriyaddii hore ee Soofiyeedka ma dhalin doono jawaabta Qodobka 5aad ee ka socota isbahaysiga. Maraykanka ayaa horeyba ugu biiray ciidamo iyo qalab si ay u caawiyaan Ukraine dagaalka ka dhanka ah mucaaradka Ruushka iyo, iyada oo la tixgelinayo dhowaanahan dhow, ayaa ballanqaaday in ay ballaariso taageerada Kiev.
“Marka laga jawaabayo khatarta argagixisada ee Ruushka iyo weerarrada aan la xakamayn ee November 25 weerar saddex markab oo maraakiib ah oo u dhashey dalka Ukraine ee ku yaala Kerch Strait, Wasaaradda Arrimaha Dibedda, oo ku xiran ogolaanshaha Congress, ayaa bixin doonta $ 10 milyan oo dheeri ah Maal-galinta si loo sii dhiso kartida awoodda badda ee Ukraine, “afhayeenka ku-xigeenka taliska ee gobolka Robert Palladino ayaa sidaas ku sheegay hadal uu soo saaray Jimcihii.
Qaraxyo waa weyn is xigxiga oo ka dhacay magaalada Muqdisho